Lemvelo - isayensi etadisha nokuxhumana womuntu kanye ezizungezile imvelo. Indoda, njengoba sazi, kuyingxenye ebalulekile bemvelo kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa ke. abantu sidilizwa Wayazi kahle kamhlophe ukuthi, bakhuleka nemvelo, bekulokhu kuba yibona zabo eziyinhloko. Namuhla, ukuba nesimo sengqondo esinjalo kungase kubonakale iwubuphukuphuku. Kusukela ezikhathini zasendulo, sekudlule cishe enkulungwaneni, esintwini zathuthuka kahle kakhulu e ngokuya isayensi nobuchwepheshe, kodwa namanje akazange wafunda ukulawula isimo sezulu kanye wafunda ngokugcwele eziningi zezenzakalo zayo. Ezinye izazi zanamuhla bakholelwa ukuthi impucuko womuntu sisonqenqemeni yokubhubha, futhi uyobhubhisa uqobo. ukungcola komoya air kwekhabhoni anobuthi zezitshalo eziningi namafektri, okuholela ekwandeni umdlavuza iziguli emhlabeni wonke, ukuncibilika kwezinguzunga zeqhwa, okuholela kwandise izinga lamanzi olwandle global, wokwehla ezihlukahlukene nezilwane ngenxa nokuqothulwa kwezinhlobo eziningi isilwane - kungaba "ukuqala kwenkathi yokuphela kwezwe"? Namuhla, izinkinga zemvelo zikhathazeke esintwini kunanini ngaphambili, ezikhungweni eziningi zemfundo kanye nomlando yemvelo kanye geography izingane ufunde mayelana nemvelo kanye nezinkinga ukungcoliswa kwemvelo, ngokuya wezwa leli gama iziteshi TV wezesayensi "isiko imvelo".
isiko Ecological siyingxenye ye mpilo esintu lubonakaliswa bezibona wobuntu ngokwaso njengoba iyingxenye ebalulekile emhlabeni zemvelo ezizungezile. Eminyakeni yamuva, kwakhulisa isithakazelo lososayensi othisha ukufunda izinkinga eziyisisekelo esizukulwaneni esisha of imfundo kwemvelo. Namuhla, izingane ezikoleni uthi hhayi kuphela ukuthi "omubi nokujikijela udoti imililo Kindle ehlathini," imfundo kwemvelo kuhilela ukuthuthukiswa olunzulu abafundi, kumiswa isimo sabo sengqondo sobuntu maqondana imvelo kanye nabantu, oyingxenye yalo ebalulekile. Umqondo "isiko emvelweni yomuntu" futhi "mpilo esintu imvelo" ayafana ngoba yomibili imelela sengqondo komuntu emzungezile.
Hhayi indima omncinyane imfundo kwemvelo yezingane zidlala umndeni, kusukela isethulo yokuqala ingane mayelana nezwe elalimzungezile akuyona esikhathini esikoleni, kodwa kuqala emuva impela. Kungenxa yobudala pre-school ingane ithola umbono sokuqala ezihlukahlukene eziphilayo kanye ngamawala bemvelo. isiko Ecological wengane kufanele abunjwe ingane isencane. Lokhu kungenzeka kuphela ngaphansi kombandela owodwa: uma abantu abadala bangenza noma imfundo kwemvelo futhi nethuba yibonise ukwehluka emangalisayo zezwe futhi ukusiza ukwakha ubuhlobo naye. Ngeshwa, ezweni lethu, imikhaya eminingi abakwazi ukunikeza ingane imfundo sabaqalayo, ukusho lutho mayelana namasiko kanye nezakhi zalo.
A umnikelo omkhulu ekuthuthukiseni imfundo kwemvelo izingane Russian wazile othisha Vasily Sukhomlinsky Nicholas Verzilin Anatoly Zakhlebnyi. Esikhathini 90 yekhulu lama-20 kothisha Russian nezazi zokusebenza kwengqondo, aye azama ukuthuthukisa izindlela eziqondile ukuze imfundo kwemvelo esizukulwaneni esisha. Waba yini umphumela wesibindi impumelelo kwabo bekulokhu ukuvela inqwaba izinhlelo zokuqeqesha: "Vula ngokwakho" E. Ryleeva, "Thina - abantu" A. Veresova, "Semitsvetik" SG futhi VI Ashikovyh etc ...
Okwamanje, akukho kungabaza ukuthi isiko kwemvelo kuyingxenye ebalulekile emfundweni jikelele esizukulwaneni sesikhathi esizayo. Nokho, ngisho namuhla kukhona nezindaba namanje abaningi kungalungiswanga emkhakheni wezemfundo: Yini ngempela nokuthi ukufundisa izingane zesikole ngezinkinga zakho zempilo ingane kumele ufunde ngaphambi, okuyinto kamuva, yini okufanele ibe izimfuneko ukuqeqeshwa kwemvelo kwebafundzi, njll